अब के गर्लान् बाबुराम ? « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 15 October, 2017 10:20 am
२९ असोज । वाम गठबन्धन भएलगत्तै राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले भनेका थिए, ‘नयाँ शक्ति डा. बाबुराम भट्टराईको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अल्झिरहेको छ । उनको व्यवस्थापन नै अहिले नयाँ शक्तिको मुख्य समस्या हो ।’ एमाओवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति गठन गरेका डा. भट्टराईलाई सुरुवाती दिनहरुमा सहयोग गरेका विश्लेषक खनालले असोजको तेस्रो साता पहिलो न्युजसँग संवाद गर्ने क्रममा बताएका यी शब्दहरु केही दिनपछि नै डा. भट्टराईका सन्दर्भमा लागू हुन पुगेका छन् ।
दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र एकीकरणका निम्ति सहमति हुने अन्तिम बेलामा नयाँ शक्ति पनि मिसिन आइपुगेको थियो । वाम राजनीतिबाट अलग रहेर बेग्लै राजनीतिक धार पक्डन पुगेका डा. भट्टराई दुई वर्षपछि वामपन्थी शक्तिहरुसँगै तालमेल गर्न आउँदा उनमा कम्युनिष्ट राजनीतिप्रति नै आकर्षण रहेको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको थियो । नयाँ शक्ति दुई वर्षकै अवधिमा छिन्नभिन्न भएपछि आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्तिको दिशातिर उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै डा. भट्टराईले वाम गठबन्धनमा सहभागी हुन चाहेका थिए ।
तर, वाम गठबन्धनमा सामेल भएपछि डा. भट्टराईको महत्वाकांक्षा त चुलियो नै । साथै, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग माओवादीमै रहँदाताकाका प्रतिष्ठाको लडाइँ पुनः बल्झियो र त्यो सतहमै देखिन पुग्यो । गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्ने डा. भट्टराईको चाहनालाई माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले अस्वीकार गरे । सो क्षेत्रका माओवादी कार्यकर्ताहरुले २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा लखेटिएका श्रेष्ठलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखे । डा. भट्टराई र श्रेष्ठबीच तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठाका लडाइँ चल्दा श्रेष्ठलाई मकवानपुर–४ मा चुनाव लड्न बाध्य पारिएको थियो ।
गोरखा–२ मा एमालेले डा. भट्टराईलाई सहज रुपमा छाडेको थियो । वाम गठबन्धनलगत्तै डा. भट्टराईले सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने उद्घोष पनि गरेका थिए । तर, गोरखा–२ मा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ र स्थानीय कार्यकर्ताहरु बाधक भएपछि डा. भट्टराईले वाम गठबन्धनबाट अलग्गिनेसम्मका कदम उठाउने तयारी थालेका छन् । अझ, गोरखा–२ बाहेक नयाँ शक्तिको कुनै आधार नै नभएको नवलपरासी, कैलाली, झापा, खोटाङ, काठमाडौंजस्ता जिल्लामा सिट माग्नुले वाम गठबन्धनपछि नयाँ शक्तिका नेताहरुमा अति महत्वाकांक्षा चुलिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
अब नयाँ शक्तिले निर्वाचन आयोगले दिएको ‘आँखा’ चुनाव चिन्हमै लड्ने घोषणा गरेको छ । गोरखा–२ माओवादी केन्द्रले नछाड्ने संकेत देखेपछि भड्किएका डा. भट्टराईले आँखा चुनाव चिन्ह लिएर आफू र अन्य नेता, कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उतार्ने संकेत देखिएको छ । यसले वाम तालमेलमा केही असहजता त देखिएला । लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने शक्तिहरुले वाम तालमेलको धज्जी उडाउलान् । तर, त्यसपछि त झनै डा. भट्टराईलाई विश्लेषक खनालले भनेजस्तै, आफ्नो व्यवस्थापन गर्न भने गाह्रै पर्ने देखिन्छ । तर, वाम गठबन्धनबाट नयाँ शक्ति अलग्गिँदा भने सो दलका निम्ति हातमा आएको चरा छाडेर अरु चरा मार्न खोज्दा हातकै गुम्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।